Taphataan Riyaal Maadriid Iker Kasiyyaas Poortoof mallatteessuuf - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Taphataan Riyaal Maadriid Iker Kasiyyaas Poortoof mallatteessuuf
Shiweeyinstaaygeriifi Peedroon Priimer Liigii Ingiliiz seenuuf qarqara irra jiru
Hanga yeroo dhihootti qillensa oduu ture. Amma garuu oduu mirkanaaye. Taphataan beekamaan, fuula Riyaal Maadriid hanga jedhamuutti kan gaye, Iker Kasiyyaas Riyaal Maadriidn gargar bayuu gareen kuni ifa taasiseera. Kasiyyaas kana booda taphataa garee Poortoo FCti. Kasiyyaas Poortoo woliin wliigaltee woggaa lamaa mallatteesseera.
Iker Kasiyyaas ganna 25f si’a 725 woyaa Maadriid uffatee garee kanaaf hiriire. Riyaal Maadriid, ‘Iker nubraa dema. Seenaafi gootummaan isaa saahuu nubiratti hafa,’ jedhe. Gareen kuni waan Iker woggoota kanniin hunda keessatti Riyaal Maadriidiif godhe hundaafis galatoomfateera. Iker Riyaal Maadriid wojjiin La Liigaa 5, geeba Mootichaa 2 fi Shaampiyoonaa Awurooppaa 3 moo’achuu danda’eera.
Maadriidiin gadi lakkisee Poortoof mallattessuu isaa namoonni tokko tokko hinjaallanne. Keessumattuu maatiin isaa, ‘Iker garee gurguddaa akka Baarseloonaaf malee Poortoof hinmalle,’ jechuun perezidaantii Riyaal Filoreentiinoo Pereez komataniiru. Deviid Beekaamis Kasiyyaas Maadriidiin gadi lakkisuu isaatti gaddeera.
Iker kasiyyaas yeroo muummee dandeettii isaa irra turetti woggoota hedduuf wolitti aansee addunyaa irratti goli-eegaa tokkooffaa ta’uun badhaafameera.
Gama biraatiinis, taphataan Baarseloonaa Perdoon Cheelsitti makamuuf, Shiweeynstaayger Baayer Muniik irraa Manchaster Yunaayitid seenuuf qarqara irra kan gayan ta’uu isaaniiti odeeffannoon jiru kan addeessu.
Previous articleWoldorgommii atleetiksii Siwiizerlaanditti ta’een Yoomiif Qajeelchaa 2ffaa ta’uun xumure; Siifan Hasan moo’atteerti
Next articleDhimmoota hariiroo lamee woljaallattan jidduu jiru diiguu malan